किट अभावले कोरोना परीक्षण सुस्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
किट अभावले कोरोना परीक्षण सुस्त
गाउँमा कोभिड–१९ का लक्षणसहितका बिरामी भए पनि संक्रमित नछुट्याउँदा जोखिम
जेष्ठ १३, २०७८ सन्जु पौडेल, नवीन पौडेल
लुम्बिनी, परासी — लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोनाको दोस्रो लहर सहर हुँदै गाउँबस्तीसम्म पुगेको छ । यहाँका गाउँगाउँमा कोरोनासित मेल खाने लक्षणका बिरामी छन् । तर किट अभावमा उनीहरूको परीक्षण हुन सकेको छैन ।
भारतबाट सुनौली नाका हुँदै घर फर्किएकाहरू रूपन्देहीको बेलहियास्थित होल्डिङ सेन्टरमा विश्राम गर्दै । तस्बिर : माधव ढुंगाना/कान्तिपुर
स्थानीय तहले नियन्त्रण प्रयास गरे पनि किट अभावमा संक्रमित छुट्याउन नसकेको बताएका छन् । प्रदेशका मुख्य नाका हुँदै भारतबाट फर्किएका सर्वसाधारण सिधै घरमा पुगिरहेका छन् । नाकामा उनीहरूको तापक्रम मात्र नापिन्छ । त्यसले संक्रमण भए/नभएको पत्ता लाग्दैन । तिनै व्यक्ति गाउँमा पुगेपछि बिरामी भएका छन् ।
सुरुमा प्रदेशका बाँके, दाङ र रूपन्देही संक्रमणको केन्द्र बनेका थिए । पछिल्लो समय संक्रमण पहाडी बस्तीमा फैलिरहेको छ । तर किट अभावमा कोरोना परीक्षण सुस्त छ । रूपन्देहीमा अहिले २ हजार ५ सय थान किट उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताए । निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण ओरालो लागेकाले परीक्षण गर्नेमा कमी आएको उनको दाबी छ । जिल्लामा अझै समुदायमा परीक्षण सुरु गरिएको छैन ।
लक्षण देखिएका र संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति स्वस्फूर्त परीक्षणका लागि पुग्छन् । ‘केही दिनमै थप किट आउँदै छ, त्यसपछि परीक्षणको दायरा बढाउन सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले उपलब्ध किटले परीक्षण दायरा बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ यहाँका स्थानीय तहले संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका परिवार र अन्यको विवरण पठाएका आधारमा किट उपलब्ध गरिएको उनले जानकारी दिए ।
किट पर्याप्त उपलब्ध भएमा स्थानीय तहमा १/२ सय जनाको समूहमा परीक्षण गरेर संक्रमण दर हेर्न सकिने उनले बताए । अहिले बेलहिया नाकामा दैनिक ६०/७० जनाको एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ । नाकामा रहेका २ हजार किटमध्ये केही प्रयोग गर्न पाइरहेको उनले बताए । दोस्रो लहर आउनुअगावै जारी भएको निर्देशिकामा एन्टिजेनमा नेगेटिभ आउने तर लक्षण भएका बिरामीको पीसीआर गर्ने, शंकास्पद लक्षण नभएकाको कुनै परीक्षण नगर्ने उल्लेख छ । त्यसले गर्दा गत वर्ष जस्तो धेरैको परीक्षण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अर्घाखाँची स्वास्थ्य कार्यालयलाई १ हजार ५ सय परीक्षण किट प्राप्त भएको छ । उक्त किट काम चलाउनका लागि मात्र पुगेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक गणेश पौडेलले बताए । अभाव भए पनि केही स्थानीय तहले किट खरिद गरी परीक्षण थालेकाले सहज भएको उनले बताए । ‘गाउँमा रहेका बिरामीको परीक्षण नगर्ने हो भने यतिले पुगिरहेको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षण गरेर संक्रमण पत्ता लाग्यो भने अस्पतालमा बेड नपाउने, समाजमा हेपिने सोचले पनि कोरोना नजाँच्ने धेरै छन् ।’
लक्षणसहितको संक्रमण हुँदा पनि लुकाएर घरमै बसिरहेका धेरै भएकाले समुदायमा फैलिएको उनले बताए । संक्रमण यही गतिमा बढ्दै गएमा किटले नपुग्ने पौडेलको भनाइ छ । जिल्लाबाट प्रत्येक दिन ५० देखि ७० वटासम्म स्वाबका नमुना पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको छ । त्यसमध्ये २५ देखि ४५ जनासम्ममा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ ।
संक्रमण दर बढिरहेको रोल्पामा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अहिलेसम्म २ सय थान मात्र किट पठाएको रोल्पा स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख नोखराज पोखरेलले बताए । दुई साताअघि प्राप्त उक्त किटमध्ये ५० थान जिल्ला अस्पताल र १५/२० थानका दरले पालिकालाई वितरण गरिएको थियो । ‘किट अभाव छ,’ उनले भने, ‘निर्देशनालयबाट प्राप्त किट एउटा गाउँको परीक्षणका लागि पनि पुगेन ।’ १० वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा एउटा पालिकाका लागि कम्तीमा २ सयसम्म किट आवश्यक रहेको उनले बताए । रोल्पाका कुनै गाउँमा ८० प्रतिशत संक्रमित भेटिएकाले परीक्षणको दायरा नबढाए आगामी दिनमा झन् समस्या आउने उनले बताए । ‘अझै ८ हजार किट चाहिने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइने स्वाबको नतिजा ढिला आउने भएकाले एन्टिजेन परीक्षणतर्फ धेरैको चासो छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कोरोना संक्रमण व्यापक छ । परीक्षणमा एकरूपता नहुँदा संक्रमितको संख्या घटबढ भइरहेको छ । धेरै जिल्लामा एक महिनादेखि निषेधाज्ञा छ । ती जिल्लामा संक्रमण दरमा उल्लेख्य कमी आएको छैन । त्यसैले समुदायमा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणमा विज्ञले जोड दिइरहेका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा यसअघि आएको १८ हजार ५ सय किट प्रत्येक जिल्लामा पठाइएको कोरोना फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताए । ‘दुई लाख थान नयाँ किट उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त किट वितरण गरेपछि परीक्षणको दायरा बढ्छ ।’
यसअघि १२ जिल्लाका लागि १८ हजार ५ सय थान किट अपुग रहेको उनले बताए । प्रदेशमा बुधबार संकलित २ हजार ८ सय ३५ नमुनामध्ये २ हजार ७ सय ६२ जनाको आरटी पीसीआर परीक्षण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । संक्रमण दर २३.२५ प्रतिशत छ । अहिलेसम्म ३ लाख १३ हजार ८ सय ३ नमुना परीक्षण गर्दा ७२ हजार ९ सय ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेश प्रयोगशालाका अनुसार १ हजार २ सय ६ वटा नमुना परीक्षणको प्रक्रियामा छन् ।
मेसिन नै थन्कियो
पश्चिम नवलपरासीमा पीसीआर हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पीसीआर मेसिन पश्चिम नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा प्रयोगविहीन भएर थन्किएको छ । सञ्चालनका लागि आवश्यक ठाउँ व्यवस्थापन र सहयोगी उपकरणमा लगानी गर्न आफूसँग बजेट नभएको भन्दै अस्पतालले थन्क्याएको हो । जिल्लामा संकलन गरिने स्वाब पीसीआरका लागि बुटबल पठाउने गरिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएयता जिल्लमा संक्रमण पुष्टि भएकाको संख्या ३ हजार ९ सय २७ र मृत्यु हुनेको संख्या करिब ७० पुगेको छ ।
जिल्लामा कोरोना जाँच नहुँदा संक्रमणको जोखिम घटाउन चुनौती छ । लक्षण देखिएकाको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नै तीन/चार दिनमा आइपुग्दा समस्या रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी गृहजिल्ला आउँदा तत्काल पीसीआर मेसिन स्थानीयले माग गरेपछि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालमा ठाउँ नभएपछि उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीले मेसिन राख्न भवन उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पहिले भवन अभाव देखाउँदै मेसिन सञ्चालनमा आनाकानी गरेको अस्पताल प्रशासननले अहिले थप उपकरण खरिदका लागि बजेट नभएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ । ‘पीसीआर मेसिन आए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति हामीसँग छैन,’ पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मोहम्मद नुरुल होदाले भने, ‘यसका लागि हामीले प्रदेश र केन्द्रसँग बजेट मागेका छौं । आश्वासन पायौं, बजेट निकासा हुनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १०:४८
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका १९ वटा निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका छन् ।
दुईथरी निवेदनमध्ये साधारण प्रकृतिका निवेदनहरु जबराको इजलासमा परेका हुन् । संवैधानिक इजलासमा तोकिएका निवेदनहरुको पालो शुक्रबार आउनेछ ।
१९ वटा निवेदनमध्ये केहीमा सरकारलाई अनुकूल हुने निवेदनहरु पनि छन् । तिनमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने मागसमेत छ ।
अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपाने || राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौ समेत
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १०:३३